Knife naJo Nesbø. Harry Hole nenyaya yake yepamoyo | Zvazvino Zvinyorwa
Zvakaitika 17 yeOctober rakabudiswa Banga, yekupedzisira novel na Jkana Nesbø, wechigumi nemaviri chikamu cheiyo akateedzana nemuridzi wayo Harry Hole. Asi zvezuva iri ndakanga ndaverenga kare kwandiri, icho chinhu chimwe izuva rekutanga rebhuku uye chimwe chiri kumberi muzvitoro zvemabhuku. Zvakare, kana ari Jo Nesbø naHarry Hole wangu kukoshesa kwakazara uye ini ndinowanzo tora avhareji yemazuva maviri kana matatu. Izvi ndizvo zvinoitika kana, zvinosuruvarisa kana nerombo rakanaka, iwe uine yakawanda nguva yekuverenga.
Izvi zvangu wongororo chaiyo wega de Banga. Zviripachena Ini ndichavhara iyo nguva yechiratidzo cheimba Nesbø, asi ndizvo zvinonyanya kukosha verenga mazita apfuura kana ziva akateedzana zvakanyatsonaka. Uye zvirokwazvo kurega kusvibisa uye mhandara muHells Hole. Kubva kwaakapinda mazviri zvino, tichaona kana achigona kubuda.
1.2 Nguva dzose kunakidzwa
1.3 Zvinokanganisa, vekare vaunoziva uye izvo zvinopera ...
1.4 Hapana kukanganisa
Zvairatidza kuti zvese zvinogona kuenda zvakanyanya kana zvishoma zvakanaka, kana chimwe chinhu chakadai chichigona kuvapo muchadenga cheHole, kana tapedza Nyota. Asi zvinoitika kuti isu takatanga izvi Banga game Harry achigara ega mushure mei Rachel, iye oga mukadzi waakambodiwa zvechokwadi, zvachose kudzingwa pamba. Uye hatizive nei. Chii chimwe, adzoka kuzonwa uye mabasa akaendeswa kukona yekupedzisira yebazi remapurisa eOslo. Anotarisira nyaya dzisingamufarire uye obvunza zvakare sei akaimonazve zvese muhupenyu hwake hwega. Asi mufaro naHarry Hole ipfungwa mbiri dzakafanirwa kusambosangana.
Panguva imwechete iye ari kusununguka Svein Finne, imwe yeiyo vabati chibharo akateedzana akaiswa naHarry mutirongo uye waari kuda kubata zvakare. Ipapo Harry anomuka mamwe mangwanani asina kurangarira chero chinhu kubva husiku hwapfuura, asi ave all maoko akatsiviwa neropa nembatya. Ndiwo mavambo eroto rakaipisisa, rinoitika, iro raunofanira kutarisana naro. Kana kukanda tauro ndokunyangarika.
Nguva dzose kunakidzwa
Avo vedu vane zano reHarry Hole mumoyo medu vatove kupfuura kurairwa pamusoro pezvakatarisirwa, kushoropodzwa kana kurumbidzwa kuchikamu chitsva icho chakaburitswa mune akateedzana. Chinhu chimwe chete ichocho chinogara chichiitika. Uye neyekupedzisira zvakare: zano rakanakisa, risingapfuurwe, Nesbø pakunaka kwazvo, risingakundike, Harry azviuraya zvakanyanya uye akatsunga kupfuura nakare kose kuti awane chokwadi.
Handizivi. Idzi ndidzo pfungwa dzevatsoropodzi nyanzvi mumhando. Ini ndiri kubva kufamba famba nemba. Uye ikozvino ndinoziva zvakare hunyengeri hwaVaNesbø. Saka Ini ndasara neiyo mhedziso yekunakidzwa uye mashoma mazwi: avo veNesbø pane maitiro ekusika, yakatsaurirwa kune vashoma vevaverengi vake avo isu takakwanisa kutaura navo mazuva mashoma apfuura.
Kugadziriswa kwaro kwakanatswa, kunozivikanwa kare kukutora iwe kuenda kune iwo mamiriro iwe aungave wakafungidzira (kana kwete), asi nguva dzose usingazvizive. Kana, pane kudaro, kana uchikwanisa kunyevera. Uye kune kugona kwake, nekuti zvakare nguva dzose unozvirega uchienda uye unowa mumusungo. Ah hongu, zvaive izvi, asi… wakazviita sei zvinoshamisa kuti undiudze. Uye pano anozviita zvakare.
Zvinokanganisa, vekare vaunoziva uye izvo zvinopera ...
Ye ellipsis, nekuti iyo Nesbø nguva dzose inotisiya isu takarembera kupfuura munhu weParaguay, ane moyo unorema uye chibhakera mumuromo make kubva mukurohwa (s) kwaakatipa kare. Uye izvo takazvinzwira, nekuti naHarry haabiridzi. Iyo inogara ichikupa iwe ruzivo uye zvikonzero: munhaurirano pakati pevatambi, muzvikamu, mune ramangwana rese zvinoenderana nekuvakwa kwayo. Uye mune yake yakasarudzika chirevo chekutanga: njodzi yakanyanya, nekurasikirwa kwayo, kutengesa kwayo uye, kunyanya, kunzwa kunogara kuchiuya ne: inogara kwenguva yakareba kupfuura mufaro.
Saka izvozvo vaverengi izvo mu Mapurisa o Nyota Vakanga vasingafare nezve avo vanonzi mufaro uye kudzikama muhupenyu hwaHarry havafaniri kunyunyuta zvimwe. Izvo zvisina maturo zvapera uye ndizvozvo yakanyanya kurohwa kuti iwe unogona kupfeka. Zvimwe izvo kupera izvo zvinotitarisira mune imwe yeaya anofumura hurukuro. Kutanga anoda kutikanganisa zvishoma. Ko kana akatidzosera kuKaja Solness (Mbada) kune chiitiko, icho kana chikaisa mumwe munhu anofungidzirwa kunze uko. Hapana, mugumo unouya uye tinodzokorora: ah, hongu, hongu, asi anoyemura.
Hapana kuvimbika kumuverengi. Chete kuna Harry, kune musimboti wake semuenzaniso weiyo antihero uye zvakare yeumwe wevatambi kunyanya kudanana uye epic izvo zvakagadzirwa mumabhuku enguva ino zvisinei nemhando. Saka zvino awira mugehena rake rakasarudzika. Asi zviripo. Vakamira. Pamwe rimwe zuva ndinogona kuzomboidzima. Ngatione izvo zvinosarudzwa nababa vake wemasimbaose. Uye iye haazombotiteerera isu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhema nhema » Knife, naJo Nesbø. Harry Hole negehena rake chairo